Maitiro Ekugadzira Yemahara Apple Developer Akaundi | IPhone nhau
Kusvika gore rino, kuti ndikwanise kuyedza chishandiso cheIOS zvaive zvakafanira kuve ne anovandudza account iyo yaitengwa pamadhora 99 pagore. Nekunyorera uku, chero mushandisi anogona kuisa yavo yega application pane yavo iPhone, iPod Kubata kana iPad uye, gare gare uye kana vachida kudaro, chiise kuApp Store. Izvi zvakanakira vashanduri vanotoziva kwazvo kwavari kuenda, asi hazvina kunaka kune avo vanogadzira vanoda kuita bvunzo dzavo dzekutanga. Izvi (zvinofungidzirwa) kuti sei sezvo iOS 9 Apple ichibvumidza chero munhu kuisa ma "own" mafomu pamidziyo yavo asina account yakabhadharwa.
Zvino, kana mushandisi aine chishandiso uye achida kuchiyedza pachigadzirwa chavo, vanogona kushandisa Xcode ku "kurasa" paari. Xcode ichaunganidza kunyorera uye kusaina neakaundi account yemahara. Asi kanganwa nezve piracy. Izvo hazvigoneke (uye isu hatingatsanangure kuzviita sei) kumisikidza .ipa faira yatinowana paInternet neXcode. Izvo iwe zvaunogona kuita kuisa emulators kana mashandisiro atinawo kodhi kodhi, kodhi iyo vanogadzira ivo pachavo vanoisa kune yavo webhusaiti kana, kazhinji, kuGitHub.
Maitiro ekugadzira uye kushandisa yemahara yekuvandudza account
Tiri kuenda IWE WEBHU y isu tinogadzira Apple ID (Tinodarika iyi nhanho kana isu tatova neyako).
Iye zvino tinoshandisa yedu Apple ID kuiisa Apple Developer Nhengo Center.
Apo patinopinda, tinoona peji yemitemo nemamiriro. Isu tinotarisa bhokisi uye tinogamuchira.
Tatova neakaundi yedu kugadzirwa. Iye zvino tinofanirwa kuishandisa, saka isu tinovhura Xcode.
Isu tinoenda kumenu Xcode / Zvaunofarira / maAccounts.
Tinodzvanya pane iyo Sum chiratidzo (+) uye tinowedzera Apple ID (Wedzera Apple ID) yatinoda kushandisa kusaina maficha atiri kuda kuisa.
Uye isu tingave nezvose zvakagadzirira kuisa zvinoshandiswa zvisingabvumirwe neApple pane yedu iPhone, iPod, iPad uye kunyange yechina-chizvarwa Apple TV, senge Provenance, iyo Mame emulator kana yewebhu browser yeiyo set-yepamusoro bhokisi. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuisa iyi mhando yekushandisa, unogona kushanyira chinyorwa pa maitiro ekutamba echinyakare macompso paApple TV 4. Maitiro acho anoshandawo pane mamwe ese maIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira yemahara Apple yekuvandudza account yekushandisa muXcode
Izvo hazvishande, zvinondiudza ini ndinofanira kutarisa, 99 madhora
Pindura kune Hazvishande
Mhoro. Izvo ndezvekuisa maapplication. Kana iwe ukagadzira iyo yemahara account, iwe unogona kuishandisa.
Izvo hazvishande kwandiri kana, kana ini ndagadzirira zvese muXcode (Provenance) kana ndichiiisa paApple TV zvinondipa iko kukanganisa kumwe chete.
Ndokumbirawo utsanangure zvakadzama zvaunofanira kuita kana wagamuchira mamiriro ekushandisa.
Ukangobvuma, iwe unotova neakaunzi yekukwanisa kurasa zvikumbiro neXcode. Iwe unofanirwa kuita zvese zvinotaurwa mune imwe posvo ( https://www.actualidadiphone.com/como-jugar-a-las-consolas-clasicas-en-el-apple-tv-4/ ). Ndeipi nhanho iyo inokundikana iwe?
Mune yekupedzisira nhanho, iwe paunodzvanya iyo yekutamba katatu kuendesa iyo app kuApple TV, zvinondipa inotevera kukanganisa: An App ID Ine chitupa com.jamsoftonline.ProvenanceTV. Kumusoro hakukwanisike. Ndokumbirawo kuti tambo yakasiyana.
Izvi mushure meKutadza kukodha chiratidzo «Topshelf» nezvimwe, uye simbisa Gadzirisa Nyaya
Inotsanangurwa muiyi link. Iwe unofanirwa kutora nhanho yekuisa zita raunopinda iwe pachako. Semuenzaniso, com.SrAparicio.ProvenanceTV
SaAlex, iniwo ndinoita nhanho iyoyo, uye ini ndinotevera vhidhiyo yekubatanidza kune iyo tsamba uye inopa kukanganisa kumwechete zvakare mushure mekurova kutamba: hazvinzwisisike, pelase pinda tambo yakasiyana
Zvine musoro, chimwe chinhu chakakanganisika, asi kubva pano handisi kuziva kuti chii.
Edza. Dhawunirodha faira racho nemaoko kubva kuGithub. Paunotora pasi, tarisa kuburikidza nemaforodha eprojekti faira (ine Xcode icon). Kana iwe ukabaya kaviri, ichaivhura muXcode.
Iko hakuna zvimwe zvakawanda: yemahara yekuvandudza ID uyezve, muchikamu chimwe chete, sarudza yako Apple ID uye chinja iro zita. Ini handisi mugadziri uye ndakazviita kakawanda.
Ok, ndinokutendai zvikuru nechinyorwa uye nenguva yenyu.
Shamwari, ndakazviita pakupera kwevaviri, ndakachinja zita sekuonekwa kwaro muvhidhiyo, unofanirwa kuziva kuti gwaro rekugadzirisa riri pazasi peunoshandura rinofanira kunyangarika, kana ukachinja iro uye inobviswa, enda pazasi uye kune mafaera maviri, ini handirangariri mazita zvinosuruvarisa asi ndakadzima rechipiri uye naro ndakaripa raitamba uye rakashanda chero rubatsiro kundinyorera link_gallas@hotmail.com uye isu tinozvigadzirisa ok
Alex, maita basa kwazvo, ndazviita sekureva kwamandiita uye zvese zvakanaka.
Pasina rubatsiro rwako ndingadai ndisina kubudirira, zvingadai zvisina kumbouya kwandiri kuti ndibvise iyo faira.
Ndiri kufara shamwari kuti iwe unogona kuve wekubatsira !! Nakidzwa nazvo, kudzokera kune iyo mitambo ndiyo yakanyanya kunaka! Tiri kubasa kwako
Alex Santamaria akadaro
Zvinondipa kukanganisa kana ndasvika padanho rekupedzisira, zvinondiudza kuti nhoroondo iyi haina kukodzera kuitisa izvozvo
Pindura kuna Alex Santamaría
Ini ndinotevera iyo nhanho yekuchinja zita, ziviso yeyakagadziriswa inobviswa asi kana ini ndapa kutamba inopa iko kukanganisa kumwe chete
Unogona here kuva neapp muapvv4 kweinopfuura vhiki? Iwo maapplication andinosaina anongopera vhiki imwe chete. mukana weusingagumi?